Aferan-tany : Namoaka « avis de recherche » ny Bianco -
AccueilSongandinaAferan-tany : Namoaka « avis de recherche » ny Bianco
Niteraka resabe tany anaty tambazotra sy facebook ny aferan-tany antsoina hoe « Tany Gasy ». Maro ireo olona milaza ho voasoloky tamin’ity famarotana tany manodidina an’Antananarivo ity no naneho ampahibe-maso ny halahelony. Tao ireo efa nahaloa vola tanteraka kanefa tsy nety nahazo ny tany nampanantenaina azy. Nisy kosa ireo nandoa ny ampahany kanefa tsy nisy tohiny intsony izany taty aoriana. Fitoriana an-jatony manodidina ny resaka “Tany Gasy” moa no efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana.
Tsy nijanona hatreo anefa ny raharaha fa dia namoaka “avis de recherche” ihany koa ankehitriny ny Bianco ka ny lehiben’ny orinasa MADATERRAIN, Ramangasoavina Herilanja Gerald no voarakitra ao anatin’izany filazana izany. Nandefasana izany “avis de recherche” izany avokoa ny Komandin’ny Zandariamariam-pirenena, ny Tale Jeneralin’ny Pôlisim-pirenena, ireo fari-piadidian’ny Zandarimaria manerana ny Nosy, ireo sampan-draharaha rehetra ao amin’ny Fitandroana ny Filaminana Anatiny manerana ny Faritra ary ny sampan-draharaha rehetra ny Bianco. Miantso ny olom-pirenena rehetra hanome tanana azy amin’ny fikarohana ny lehiben’ny orinasa MADATERRAIN ny Bianco koa afaka miantso amin’ny laharana 020 22 459 52 na 261 33 02 00 296 izay manam-baovao momba izany.